ပေါင်မြို့နယ်တွင် လယ်ယာမြေများအား ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အကွက်ရိုက်ရောင်းချနေမှုများ မည်ကဲ့သ? - Yangon Media Group
”တချို့မြို့နယ် လယ်စီနဲ့ ကျေးရွာလယ်စီတွေဟာ လယ်ယာ မြေအကွက်ရိုက်ရောင်းနေတာကို ကိုယ့်တာဝန်အရတားမြစ်ရမယ့် လုပ်ငန်းတွေကို မဆောင်ရွက်တဲ့ မြို့နယ်လယ်စီတွေနဲ့ ကျေးရွာလယ် စီတွေကို မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအနေ နဲ့ ဘယ်လိုအရေးတယူဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတာကိုသိချင်လို့မေး မြန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ပေါင်မြို့နယ် အတွင်း ဥတ္တံတားကျေးရွာ၊ ဆားဒိုရပ်ကွက်၊ မိုးနိုင်းရပ်ကွက်၊ ထန်းပင်ချောင်ကြီးကျေးရွာ၊ ကတွန် ကျေးရွာ၊ မုတ္တမ-ကျွဲခြံကျေးရွာ၊ ကျုံကကျေးရွာ၊ ကျခတ်ငူကျေးရွာ၊ နတ်ကြီးချောင်ကျေးရွာတွေမှာ ကျူးလွန်ဆောင်ရွက်နေတာကို စိစစ်တွေ့ရှိရပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
”ကျွန်မတို့ ပေါင်မြို့နယ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ဟိုဘက်အစိုးရ လက်ထက်ကတည်းက လယ်ယာ မြေကို အကွက်ရိုက်ရောင်းနေ ကြတယ်။ အရေးယူမယ်လို့ပြော နေကြပေမယ့် အရေးယူတာမတွေ့ရဘူး။ အခုအချိန်မှာ လယ်ယာမြေ ကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအကွက်ရိုက် ရောင်းတာတွေ ပိုမိုများပြားလာ ပြီး ဝယ်တဲ့သူတွေလည်းပိုများလာတယ်”ဟု ပေါင်မြို့နယ်မှ ပြည်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ရလဒ်ကောင်းများ ပြန်ရရန် ချဲလ်ဆီး ကစားသမားများ ယုံကြည်မှုရှိ၊ လိဂ်ဖလား ဗိုလ်လုပွဲတွင် ရှုံးပ?
ရီးရဲလ်ကို အနိုင်ယူပြီး စံချိန်များကို ဆီမြွန်နီနှင့် အက်သလက်တီကို ချိုးဖျက်၊ အသင်းတွင် ဆ??